xnxx: Tsvaga iyo gumi nemitatu goridhe yezuva rakabudirira rekutanga - Tamban RELAY
By bryamangwanabe Last updated Nyamavhuvhu 4, 2020
Tsvaga iyo misere segoridhe mitemo yakabudirira yekutanga.
Iwe hauna kuroora uye kutsvaga rudo? Hukuru, chinyorwa ichi ndeche rako! Isu tinotoda kukuudza kuti ino ndiyo nguva yekutora zvinyorwa kana iwe uchida kuzviuraya pazuva rako rinotevera! Mushure mekukuzivisa iwe nzvimbo gumi kwainopwanya zvakanyanya muzhizha, tinodzoka kwauri nhasi kuzokudzidzisa. Isu tiri kuzotora isu pachedu kuna Lucie Mariotti (muridzi werudo weVilla des Cœurs Brisés) kukupa iwe matipi akanakisa ekuti zuva rako rinotevera riitike zvakanaka. Isu tinoziva, inogara ichishungurudza asi nezano redu, iwe uchauya sa mambo / vahosi! Enda pazasi chete kuti uzive.
1. Pfeka chipfeko chakakwana
Kwemusi wekutanga, tinokupa zano kuti upfeke chipfeko chinotaridzika sewe! Hapana chikonzero chekuita zvakawandisa kana kusakwana, iwe unofanirwa kuwana chiyero chakaringana uye kuenderana nehunhu hwako uye munhu wauri muhupenyu hwezuva nezuva.
2. Sarudza nzvimbo yakakodzera
Ah hongu zvakakosha! Usazeza kupa zano nzvimbo yaunotoziva. Sei ? Zvakanaka nekuti iwe uchave nechivimbo uye uye zvakanyanya kugadzikana (uye iwe uchaziva kune iyo emergency iyo iripo kana iwe uchizoda kutiza). Kwete, zvakanyanyisa, iyo ichapawo kuravira kwehuhu hwako kune yako zuva: yakatenderera, mimhanzi, inotapira ...
3. Sarudza nguva yakakodzera
Tinokupa zano kuti usarudze kana wa17-19pm kana 18-20 masikati pacho mushure mebasa kana zvidzidzo. Nenzira iyi, kana zvese zvikafamba zvakanaka iwe unogona kuwedzera zuva kana pane zvinopesana kana iwe ukaodzwa mwoyo, manheru ako haazoparadzwi uye iwe unogona kusangana neshamwari dzako kujekesa pfungwa dzako!
Izvo zvinodikanwa kuti utore kufarira munhu ari pamberi pako. Nazvino nekuti kunzwa uchiteererwa zvinogara kuchifadza asi zvakare zvichakubvumidza iwe kuti uzive kana zuva iri riri rako chairo maererano nemhinduro dzemibvunzo yako. Ive nekuchengera kuti usatambe kopi kunyange! Asi iwe unogona kubvunza mibvunzo nezve hupenyu hwake, basa rake, zvaari, nezvimwe.
Izvo zvinoshungurudza pazuva rekutanga, isu tinoziva, asi zorora! Paunonyanya kuzorora iwe, ndipo paunonyanya kugadzirira iwe uchaisa zuva rako uye nemamiriro ekunze achave akakodzera kuva nenguva yakanaka. Usanetseka, zvese zvichave zvakanaka.
6. Tora nhanho udzoke
Kukwana hakuvepo ipapo molo Diego ! Iva akavhurika uye edza chete kutsvaga mumwe munhu anokufananidza uye asiri iye akakwana wawanga uchitsvaga kwenguva yakati.
7. Kanganwa wako wekare
Hakuna chinhu chinonyadzisa kupfuura mumwe munhu kutaura nezve ex yavo pazuva rekutanga! Zvakanaka, kunze kwekunge tikubvunza iwe mubvunzo zvechokwadi, asi zvikasadaro hatidi kuziva kuti wako wekare aive sei kumusoro uye pasi. Ex = zvakapfuura, famba uenderere mberi! Hupenyu huri pamberi pako kwete kumashure.
Hapana kumanikidzwa. Vimbai netariro, kana uchifanira kurarama hupenyu hwako nemunhu uyu nyeredzi dzinoenderana kuitira kuti dziitwe ipapo chill, tora mukana iwozvino.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://trendy.letudiant.fr/love-et-sexo-8-regles-pour-reussir-un-premier-date-a4962.html
chiteshi cheBeirut chakaputika nekuputika kaviri.